को हुन् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ युवराज भुसाल ? - Nepal News - Latest News from Nepal
काठमाडौं ६ कात्तिक । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीर्इओमा नियुक्त युवराज भुसाल २६ जेठ ०३७ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । गुल्मी बाँझकटेरी जन्म घर भएका भुसाल हाल काठमाडौं कुलेश्वर आवास क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् ।
भुसाल कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी हुन् । प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले हटाएपछि पनि भुसाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ बन्ने दौडमा थिए । तर, कांग्रेस–माओवादी गठवन्धनको सरकारले डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्ति दिएको थियो ।
गृह सचिवमा मोहनकृष्ण सापकोटाको सरुवा
बिजुली चोरी भएको जानकारी दिन नम्बर छ, सेवा छैन